I-china PVC ejikelezayo ejikelezayo yamawele Screw extruder UA-162473191-1 abavelisi kunye nabathengisi | Oomatshini abazizityebi
I-PVC yokujikeleza iwele elijikelezayo le-UA-162473191-1
I-twist-screw extruder ye-counter-parallel yaphuculwa ukusuka kwi-18: 1 yokuqala ukuya kwi-26 yangoku: 1. Inkqubela phambili enkulu yoyilo loyilo kunye ne-teknoloji yokuvelisa, iimfuno eziphezulu zibekiwe kulawulo lokulinganisa ubushushu kwisiseko se-screw .
I-twist-screw extruder ye-counter-parallel yaphuculwa ukusuka kwi-18: 1 yokuqala ukuya kwi-26 yangoku: 1. Inkqubela phambili enkulu yoyilo loyilo kunye ne-teknoloji yokuvelisa, iimfuno eziphezulu zibekiwe kulawulo lokulinganisa ubushushu kwisiseko se-screw . Ukonyuka kobude becandelo leplastikhi kunye necandelo lokulinganisa equidistant kuqinisekisa ukukhutshwa okuzinzileyo kunye nokugcwaliswa ngokupheleleyo kwezinto kunye nokuphucula umgangatho wemveliso. Ukuqhambuka kwesicwecwe sewele esicofileyo kunye neendlela zokulungisa umgqomo eziphindwe kabini zenze ngempumelelo ukusilela kwezinye izinto ezingamawele amabini athambileyo.
I-twist-screw extruder ye-counter-parallel ekhethekileyo ye-PVC yezinto eziphathekayo, i-PVC powder, i-PVC granules zonke zinokusebenza.or ngezinto ezixubekileyo zilungile kwiPlastiki yeplastiki, kuba iiprofayili ze-PVC ngokubhekiselele kwi-twin screw screw kukukhetha. eqhuba lo matshini eYurophu.
Ngobuchwephesha bobuchwephesha kunye noyilo lobuchwephesha kunye nokuyilwa ngokukodwa kweebheringi ezisebenza ixesha elide kunye nezixhobo zokunciphisa izixhobo eziphezulu, ubomi obunokuthenjwa be-extruder buqinisekisiwe. Ulwakhiwo lwendibaniselwano eguqukayo yenza ukuba iimfuno zabasebenzisi ezahlukeneyo zenzelwe ukwaneliseka
Iinkcukacha extruder ngaxeshanye, ungaqhagamshelana nathi info@zjgrcmc.com